Die Besten Hotels mit Pool in Kanazawa 2018 (mit Preisen)
Nr. 12 von 111 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 30 von 111 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 34 von 111 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 25 von 111 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 31 von 111 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 28 von 111 Hotels/Ryokans in Kanazawa